Manchester United oo dooneysa inay hesho adeegga xiddig ka tirsan kooxda Chelsea – Gool FM
Manchester United oo dooneysa inay hesho adeegga xiddig ka tirsan kooxda Chelsea
Dajiye March 24, 2020
(Manchester) 24 Mar 2020. Wargeysyada England ayaa waxay shaaca ka qaadeen in kooxda Manchester United ay xiiseyneyso lasoo saxiixashada xiddiga weerarka kaga ciyaara Chelsea ee Callum Hudson-Odoi suuqa xagaaga ee soo socda.
Wargeyska “Manchester Evening News” ayaa wuxuu shaaca ka qaaday in kooxda Manchester United ay isku dayi doonto inay la soo wareegto Callum Hudson-Odoi, haddii ay dhacdo inay ku guuldareysato inay keento Jadon Sancho.
Wararka ayaa waxay intaas ku sii darayaan in Manchester United ay xiiseeneysay adeega xiddiga kooxda Chelsea tan iyo xilli ciyaareedkii lasoo dhaafay, kahor inta uusan laacibkan qandaraaska u kordhinin naadiga Blues.
Jadon Sancho ayaa ah bar-tilmaameed koowaad u ah kooxda kubadda cagta Manchester United marka uu furmo suuqa kala iibsiga xagaaga ee soo socda, kaddib markii uu xilli ciyaareedkan ka ciyaaray 23 kulan horyaalka dalka Germany, wuxuu dhaliyay 14 gool,halka sidoo kale uu caawiye ka noqday 15 gool kale ay dhaliyeen saaxiibadiis kooxda Borussia Dortmund.
Si kastaba ha noqotee 19 jirkan ayaa soo jiitay qaab ciyaareedkiisa kooxaha kala ah Real Madrid, Barcelona iyo Paris Saint-Germain, sidoo kale waxaa doonanaya kuwa ka ciyaara Premier League ee ah Chelsea iyo Liverpool, kuwaasoo isku dayaya inay helaan adeegiisa.
Alexander-Arnold oo shaaca ka qaaday kooxda uu ka taageero Spain & xiddiga uu jecelyahay Messi iyo Ronaldo